Your should know Land Types - Diamond Inya Palace Condominium
Your should know Land Types
Your should know Land TypesJuly 15, 2020
Condo for rent Types of land to know when buying an apartment ✅✅
Condo for rent Whether you want to invest in apartments or not. Whether to buy, if you buyacondominium, an apartment building on the ground, because we need to carefully. Only then can you buyacondo. How strong is the land of the apartment? You will know for sure how much it will benefit you.
The following isalist of condos and condominiums in Myanmar. What type of land are most apartments built on?
(1) Grant land
Grant land gives the government 25 years; 60 years 70 years This is the type of land that the government has officially leased foraperiod of 90 years. According to the fixed amount of land tax according to the month Or pay according to the specified year. If there isabuilding on the grant land, the building tax must be paid together.
The grantee is legally entitled to sell. The heirs also have the legal right to inherit.
(2) Land owned by ancestral land/in Grant
The ancestral land is owned by the parents. It isatype of land that was owned by Bibin in the time of the ancestors. As it is notaland type that is legally contracted by the government forafixed period of time, It will also be exempt from annual land and building taxes. The title deed of the ancestor has the legal right to sell it himself. He also has the legal right to inherit from the heirs of the ancestral land. The legal heirs also have the legal right to sell.
Please be informed that 🏢 Diamond Inya Palace Condo is built on ancestral land, so those who want to buyaroom in Diamond Inya Palace Condo, You no longer have to pay building taxes, so you save money. Time is running out. It can reduce stress.
In addition, since it is built in accordance with the condo law, the buyer will be able to own the land proportionally.
If you are interested in buyingacondo or apartment, here are some suggestions on how to look or get an appointment for antique items.
ကွန်ဒို၊ တိုက်ခန်းတွေ ဝယ်ရင် သိထားရမည့် မြေအမျိုးအစားများ✅✅
ကွန်ဒို ၊ တိုက်ခန်းတွေကို ရင်းနှီး မြှုပ်နှံဖို့ အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နေဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဝယ်မည်ဆိုရင်တော့ ကိုယ် ဝယ်မည့် ကွန်ဒို၊တိုက်ခန်းတွေက ဘယ်မြေအမျိုးအစားပေါ်မှာ ဆောက်ထားလဲဆိုတာ သေသေချာချာ သိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါမှသာလျှင် ကိုယ်ဝယ်ထားတဲ့ ကွန်ဒို၊ တိုက်ခန်းရဲ့ မြေက ဘယ်လောက်ခိုင်မှာမှုရှိလဲ၊ ကိုယ့်အတွက် ဘယ်လောက်အကျိုးကျေးဇူးရှိလဲ ဆိုတာကို သေချာတိကျစွာ သိနိုင်မှာ ဖြစ်တယ်။
အခုဖော်ပြပေးမည့် အကြောင်းအရာလေးကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကွန်ဒိုတွေ၊ တိုက်ခန်းအများစုက ဘယ်မြေအမျိုးအစားပေါ်မှာ တည်ဆောက်ထားကြတာလဲ?
ဂရန်မြေသည် အစိုးရကို ၂၅ နှစ်၊ နှစ် ၆၀ ၊ နှစ် ၇၀၊ နှစ် ၉၀ စတဲ့နှစ်ကာလအပိုင်းအခြားဖြင့် အစိုးရမှ တရာဝင် မြေငှားစာချူပ်ချုပ်ဆိုထားတဲ့ မြေအမျိုးအစားပဲ ဖြစ်တယ်။ သူက သတ်မှတ်ထားသော မြေခွန် ပမာဏကို သက်မှတ်ထားသော လ အလိုက် (သို့မဟုတ်) သတ်မှတ်ထားသော နှစ်အလိုက် ပေးဆောင်ရသည်။ ဂရန်မြေ ပေါ်တွင် အဆောက်အအုံရှိပါက အဆောက်အအုံခွန်ကိုပါ တပါးတည်းဆောင်ပေးရပါမည်။
ဂရန်မြေအမည်ပေါက်သူသည် တရားဝင်ရောင်းချခွင့်ရှိသည်။ ဂရန်မြေအမည်ပေါက်သူထံမှလည်း တရားဝင် အမွေ ဆက်ခံပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
ဘိုးပိုင်းပိုင်မြေသည် မိဘ၊ ဘိုးဘွားဘီဘင် လက်ထက်က ပိုင်ဆိုင်လာသော မြေအမျိုးအစားဖြစ်၍ တစ် ဦးတည်းပိုင် မြေအမျိုး အစားဖြစ်သည်။ အစိုးရမှ တရားဝင်နှစ်ကာလအပိုင်းအခြားဖြင့် ချုပ်ဆိုထားသော မြေအမျိုးအစာ မဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့် လအလိုက်၊ နှစ်အလိုက်ပေးဆောင်ရမည် မြေခွန်နှင့် အဆောက် အအုံခွန်မှလည်း ကင်းလွတ်မည် ဖြစ်သည်။ ဘိုဘွားပိုင်မြေအမည်ပေါက်သူသည်တရားဝင် ကိုယ်တိုင် ရောင်းချ ခွင့်ရှိသည်။ ဘိုဘွားပိုင်မြေ အမည်ပေါက်သူထံမှလည်း တရားဝင် အမွေ ဆက်ခံပိုင် ခွင့်ရှိသည်။ တရာဝင် အမွေ ဆက်ခံသူဘက်မှလည်း တရားဝင် ကိုယ်တိုင် ရောင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
ဆက်လက်၍ဖော်ပြလိုသည်မှာ🏢 Diamond Inya Palace Condo🏢 ဘိုဘွားပိုင်မြေပေါ်မှာ တည်ဆောက်ထား သော ကြောင့် Diamond Inya Palace Condo တွင် အခန်း ဝယ်ယူမည့်သူ အနေဖြင့် မြေခွန်၊ အဆောက်အအုံခွန် ဆောင်စရာမလိုတော့သည့်အတွက်ကြောင့် လူကြီးမင်းတို့အနေဖြင့် ငွေကုန်၊ အချိန်ကုန်၊ စိတ်ပင်ပမ်းမှုကို လျော့ချ စေနိုင်မှာ ဖြစ်တယ်။
ဒါ့အပြင် ကွန်ဒိုဥပဒေနှင့် အညီ ဆောက်လုပ်ထားသည့်အတွက်ကြောင့် အခန်း ဝယ်ယူမည့် သူ အနေနဲ့ မြေကို အချိုးကျပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လူကြီးမင်းတို့အနေဖြင့် ကွန်ဒို၊တိုက်ခန်း ဝယ်ဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားနေတယ်ဆိုရင်တော့ အထက်ဖော်ပြပါ အချက် အလက်တွေကို ထည့်သွင်းစဥ်းစားနိုင်ရန်အတွက် အကြံပေးဖော်ပြလိုက်ပါတယ်ရှင့်။🙏🙏🙏
Ph : 09-420097992~5,09-777898988/98
Website : www.diamondinyapalace.com